SFC neEFF Yakafumura DMCA Kunze Kwakaitwa Gore rino | Linux Addicts
SFC neEFF Yakafumura DMCA Kunze Kwakaitwa Gore rino
Darkcrizt | 29/10/2021 20:35 | Noticias
Masangano ekodzero dzevanhu e CFS (Software Freedom Conservancy) uye EFF (Electronic Frontier Foundation) ichangobva kuburitsa zvigadziriso mu "Digital Millennium Copyright Act" (DMCA) qiyo inotsanangura rondedzero yezvisizvo izvo zvisiri pasi pezvirambidzo zveDMCA mukuwana kutonga matekinoroji.
Kubva pamakore matatu oga oga, dare rinokosha rinosangana kuUnited States Library of Congress, iyo, panguva yekunzwa pfungwa dzevanhu, dSarudza kudzokorora rondedzero yevasingabvumirwe inotsanangura mamiriro ayo iyo DMCA isingakwanise kushanda.. Rondedzero iyi inogadzirirwa kudzivirira kubva mukushungurudzwa uye zvirambidzo zvisina musoro zvinogona kusimudzirwa pasi pechiratidziro cheDMCA, pasina kutyora kodzero yekodzero.
Izvo zvakasarudzika zvakatenderwa gore rino zvinobvumidza kuisirwa mamwe mafirmwares pane marouters uye mamwe madivayiri etiweki (kusanganisira jailbreak uye bypass links kune DRM firmware). Kusarudzika kunopa mushandisi sarudzo yekuwedzera hupenyu hwechishandiso chavo mushure mekupera kwerutsigiro rwemugadziri nekuisa imwe firmware senge OpenWrt.
Uyewo Kunze kwakapfuura zvichibvumira kuongororwa kwepamutemo kwefirmware yechishandiso kuitira kuti uone uye usimbise kukanganisa kunogona kuitika kwemarezinesi ecopyleft anoda kuvhurwa kwemabasa anotorwa. Kusarudzika kunoshanda kune ese marudzi emidziyo, kunze kwemitambo consoles.
Yaimbove yakasarudzika ine chekuita nemvumo yekuvhura, kushandura firmware, kugadzirisa uye kuisa maapplication, zvisinei nekuti akatenderwa nemugadziri kana kwete, aimbove achishanda kune smartphones (jailbreak), mahwendefa uye zvimwe nharembozha, yakawedzerwa nekuremekedza mukana wekutsiva zvachose smart TV software.
Zvikamu zvezvishandiso izvo kune zvisizvo zvakawedzerwa, izvo inobvumira kuita kugadzirisa kwakazvimirira. Iyo Kodzero yeKugadzirisa chirongwa chiri kusundidzira kuti waivers igadzirise chero mudziyo, uye yaswedera padyo nechinangwa chayo gore rino. Zvigadziriso zvakapasiswa kuti zvibvumirwe kuongororwa, kugadzirisa, uye kugadzirisa chero mudziyo wevatengi, kusanganisira e-vaverengi, marekodhi vatambi, uye vatauri vakangwara, pamwe nekugadziriswa kwemotokari, zvikepe, uye zvigadzirwa zvekurapa.
Pamidziyo yekurapa, kugadzirisa uye kudzoreredza data rakachengetwa pachishandiso chako pachako kunotenderwa, zvisinei nekuti mudziyo wakaiswa kana kwete.
Kunze kune hukama ne decryption yeDVD, Blu-Ray uye zvepamhepo masevhisi zvinhu zvakawedzerwa, anoshandiswa kugadzira remixes kusanganisira mavhidhiyo ega ega. Iye DMCA yakabvisawo mitambo yemakomputa nemitambo yekunyaradza, iyo vagadziri vakamira kutsigira zvigadzirwa zvayo, ikozvino mafani emutambo wekombuta anogona kuita zviri pamutemo shanduko kune ekare mutambo maapplication uye game console firmware kudzivirira zvinongedzo kune ekunze masevhisi emitambo uye maseva echokwadi. Izvo zvakasarudzika zvakawedzerwa kuti zvibvumire kushandiswa kwezvimwe zvinhu mumaprinta e3D.
Chikumbiro chekuisa zvidzidzo zvekuvanzika mukuregeredza kwakawedzerwa hachina kupihwa, kubvumira vaongorori vezvekuchengetedza kuti vaongorore zvigadzirwa zvesoftware kuti vaone kusasimba uye kuzvibata-bata izvo zvakawanikwa. Komisheni yakagumisa kuti shanduko yakadaro yakanga isingakoshi sezvo zvidzidzo zvepachivande zvinowira mukati metsanangudzo yezvidzidzo zvekuchengetedza uye hazvidi kuregererwa kwakasiyana.
Zvigadziriso zvinobvumidza kugadziriswa kwemitambo consoles hazvina kubvumidzwawo. (kugadzirisa kwemitambo consoles kunoganhurirwa nekugona kuzvitsiva kwemaoptical drive) uye zvishandiso zvine firmware inoshandiswa kune zvekutengesa kana zveindasitiri zvinangwa, kunze kwemotokari nemidziyo yekurapa. Semuenzaniso, kuzvigadzirisa uye kushandura marobhoti vacuum cleaner kunoonekwa zvisiri pamutemo.
Pakati pezvinhu zvisina kugadziriswa, zvinoonekwa zvakare kuti hapana kunze kwekugoverwa kwezvishandiso zvinoshandiswa pakugadzirisa: kupihwa kwezvishandiso zvinodarika makiyi emugadziri zvichiri kunzi zvisiri pamutemo.
Zvinocherechedzwa kuti komisheni iyi haina mvumo yekutora rimwe divi panyaya iyi, sezvo ichida kuvandudzwa kwemutemo. Nokudaro, mamiriro ezvinhu anomuka apo mushandisi akapiwa kodzero yekuzvimiririra kuchinja firmware uye kudarika chinongedzo kune zvigadzirwa zveparipheral paXbox yake, asi kugovera kodhi yekuita zviito zvakadaro hazvisi pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SFC neEFF Yakafumura DMCA Kunze Kwakaitwa Gore rino